ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အစိုးရရဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုကို ရန်ကုန်သံဃာတွေ ဆန္ဒပြ
အစိုးရရဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုကို ရန်ကုန်သံဃာတွေ ဆန္ဒပြ
မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်တယ်လို့ စွပ်စွဲတယ်ဆိုရင် ရခိုင်လူမျိုး တွေထဲကရော တယောက်မှမသေဘူးလား ရခိုင်အိမ်တွေလဲ မီးရို့ခံရတာဘဲလေ လူမျိုးစု နှစ်ခုကြားဖြစ်တဲ့ ကိစ္စကို လူမျိုးတုန်းသတ်တယ်လို့ ပြောရင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာတွေက ဘာကြောင့် မြန်မာစကား ရခိုင်စကားကို လုံးဝမပြောကြတာဟာ အထူးဆန်းဆုံးပါဘဲ လူသားခြင်း ကိုယ်ခြင်းစာ ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဧည့်သည်ဟာ အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ်ချင်လို့ မရပါဘူး အိမ်သားဖြစ်ချင်လို့မရပါဘူးဗျာ လူ့အခွင့်အရေး လူသားချင်းကိုယ်ချင်းစာမှုလို့ ပြောပြောနေကြတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင် ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာ ကျနော် သုံးလ လာနေမယ် အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ်ခွင့်တောင်းရင် လူအခွင့်အရေးအရ လူသားချင်ကိုယ်ချင်းစာတယ် ဆိုခဲ့ရင် ခင်ဗျားတို့ ခွင့်ပြုမှာလား သေသေချာချာ ခံစားပြီး အဖြေပေးကြည့်ပါလားဗျာ...။
lwk . ညီလေးတုိ့ပညာကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်သင်ယူပါ. .နိုင်ငံရေးကိုလေ့လာပါတဖြေးဖြေးသိသွားမယ်။ရန်ဖြစ်နေရင်အကြောင်းမထူးပါဘူးဒို့မြန်မာလူမျိုးတွေသိခါင်္ကျပါတယ်နိုင်ငံကြီးသားပီသအောင်နေကွာ။ဆရာလုပ်တယ်မထင်နဲ့ကွာ အကြံပြုတယ်ကွား။ ညီလေး
kyat phyu said...